ADWUI (Adda Dimokraatawaa Warraaqsa Uummata Itoophiyaa) - BBC News Afaan Oromoo
Siidaan yaadannoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu Birrii miiliyoona sadii oliin ijaarame eebbifamuuf akka jiru Itti-gaafatamtuun waajira Aadaafi Turizimii Godina Shawaa Kaabaa Aadde Almaaz Makibab BBC'tti himan.
Sabboonummaan Oromoo eessaa ka'ee eessa ga'e? Biyyaaf yaaddoodhamoo humna biyyi ittiin ijaaruun danda'amudha? Gaaffiiwwan kana irratti BBC Afaan Oromoo hayyoota iyyaafateera.
Hayyuu Seeraafi Ingiliiz Yunvarsiitii Keelitti barsiisaa kan ta'an Dr. Awwal Aloo hojjetoota fayyaa dabalatee warreen tajaajila hawwaasaa bu'uuraafi addatti barbaachisoo ta'an keessa warri hojjetan hojii lagachuun mirga hin qaban jedha.
Yakka sarbama mirga namoomaa, malaammaltummaa fi aangoo seraan ala fayyadamuun kan himataman Obbo Getaachoo Asaffaa to'annoo jala hin ooliin jiru.
Godina Wallagga Lixaafi Qeellam Wallaggaa keessa yaaddoon nageenyaa akka jiru jiraattonni dubbisne tokko tokko BBCtti himaniiru.
Sirni Awwaalchaa Dr Nagaasoo Gidaadaa Soolan bakka maatii, jaallattotni fi qondaaltotni mootummaa olaanoon jiranitti raawwate
Dr Nagaasoon nama yeroo hunda dhugaa gidduugaleessa godhachuun deeman ture
Guyyaan Preesii adunyaa sadarkaa idila addunyaatti har'a kabajaamaa jira. Itoophiyaa keesatti walabummaan preesii eessaa garamitti adeemaa jira? ogeeyyiin yaada isaanii nuu qoodaniiru.
Jilli I/A Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Somaalee Obbo Musxafaa Mohaammed Umariin durfamus maricha irratti hirmaachuuf kaleessa galgala Magaala Adaamaa galeera.
Imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobiitti argamu torban dura lammileen qophii adda addaa kan akka cidhaa, kabaja guyyaa dhalootaa fi kaan yoo qabaatanii fi galma yoo barbaaddan isaan tajaajiluuf qophii ta'uu isaa ibseera.
30 Ebla 2019
Obbo Barakat Simooniifi Obbo Taaddasaa Kaasaa yakka malaammaltummaan shakkamanii to'anoo jala erga oolanii bubbuleera. Seenaa Obbo Baraka dabarsaniifi waan yeroo ammaa itti jiran haati warraa isaanii Aadde Asii Fantee kan dubbatan qabu.
Ulaawwan daangaa Itoophiyaafi Eretiraa lama guutumatti cufamu isaanii aanga'oonfi jiraatoonni naannoo sanii himaniiru.
Haalli biyyaa maalirra akka jiruufi gara fuula duraattillee maaltuu ta'uu akka malu aanga'oonni kunneen dhaamsa ergaa jajjabaa qabu dabarsanii turan.